Reeffi baqattoota lammiilee Itoophiyaa 122 ta’u naannoo galaana diimaa (Sanag) tti argamuu isaa (Horse media) gabaaseera. – Welcome to bilisummaa
Reeffi baqattoota lammiilee Itoophiyaa 122 ta’u naannoo galaana diimaa (Sanag) tti argamuu isaa (Horse media) gabaaseera.
Baqattoonni kunniin ka’umsa isaanii Somaliland taasisuun gara Yemenii fi biyyoota adda addaa kan imalaa turan baqattoota Itoophiyaa fi Somaliland balaa Dheebuu bishaanii fi nyaata gahaa dhabuun walakkaa galaanatti lubbuun isaanii darbuu danda’eera.
Baqattoota kanneen keessaa lubbuun lammiilee Itoophiyaa 80 ta’an du’arraa hafuun isaanii ibsameera. Mootummaan biyya bulchu guddina ikonomiin biyyattiin guddachaa jirti jedhus lammiileen isaanii ammaan tana balaa baqannaaf saaxilamaa akka jiran ifaadha.
Yabaloonni seeraan ala nama fe’aa jiranis qarqara galaanarratti to’annaa jala ooluun isaanii bulchaan naannoo Sanaaag ahmed abdi ibseera jedha gabaasni (Horse media)
Previous Barattoonnifi qonnaan bultoonni Haroomaayaa dhibbaatamaan lakkaayaman mana hidhaa Addeellee fii Hammarreessaatti guuramaa jiru
Next ‪#‎OromoProtests‬ cruelty of TPLF against Haromaya University students in the last 24 hour.